Horudhac: Aston Villa vs Manchester United… (Mason Greenwood & Anthony Martial oo caawa goolal u baahan si ay rikoorro u gaaraan) – Gool FM
Haaruun July 9, 2020
(Birmingham) 09 Luulyo 2020. Kooxda Manchester United ayaa isku deyi doonta inay sii kordhiso tartankeeda ku aaddan afarta koox ee ugu sarreysa marka ay caawa Villa Park ku booqanayaan naadiga Aston Villa.
Villa ayaa dhanka kale u baahan inay iska badbaadiso inay u laabato heerka labaad, maadaama ay hadda ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka, wiilasha Dean Smith ayaa wali raadinaya guushoodii ugu horreysay tan iyo bishii Janaayo.
Taariikhda: Khamiis 09 Luulyo 2020
Tyrone Mings iyo Jack Grealish ayaa diyaar u ah Kooxda Aston Villa inkastoo ay dhibaatooyin ya ryar kala kulmeen kulankii Liverpool.
Matt Targett ayaa markale lagu wadaa inuu seego kulankan madaama uu sheeganayo dhibaato muruqa ah.
Manchester United ayaa kormeeri doonta Victor Lindelof, kaasoo haawac dhabarka ah looga saaray kulankii Bournemouth.
Haddii xiddigan reer Sweden uu ka soo kabsado waqtigii uu macalinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer filayey waxa uu fursad u heli doonaa inuu ka soo muuqdo kulankan.
>- Kani waa kulankii 50-aad ee horyaalka Premier League ku dhexmaraya labadaan kooxood, Aston Villa ayaa guuleysatay kaliya saddex jeer 49-kii kulan ee la soo dhaafay, halka ay guuldarro la kulmeen 34 kulan oo kale.
>- Villa ayaa badisay kaliya hal kulan 42-kii kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League ay la kulmaan Man United (11 Barbaro, 30 guuldarro), guushooda kaliya ayaa timid kulan ka dhacay garoonka Old Trafford bishii December ee 2009.
>- Manchester United ayaan laga badinin 20 kulan oo Premier League ah oo ay marti ahaayeen Aston Villa (13 Guul iyo 7 Barbaro) tan iyo markii guuldarro 3-1 ay ka soo gaartay Villa Park maalintii furitaanka xilli ciyaareedkii 1995-96, waana guushii ugu dheerayd ee aan laga adkaan ee hal koox ay ka hormariso koox kale kulammada horyaalka.
>- Aston Villa ayaa heshay kaliya labo dhibcood sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka (2 Barbaro, 7 Guuldarro), iyagoo dhaliyay kaliya shan gool xilli ciyaareedkan.
>- Villa ayaa guuleysatay kaliya hal jeer 27-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, iyagoo maalintaas ku jira qeybta ugu hooseysa horyaalka, waxaana ay barbaro galeen 4 kulan, halka ay guuldarro la kulmeen 22 kulan.
>- Guuldarradii 2-0 ee ka soo gaartay Liverpool ayaa ahayd markii 20-aad ee xilli ciyaareedkan oo Villa laga dhaliyay labo gool ama wax ka badan horyaalka Premier League.
>- Guuldarradii ka soo gaartay Liverpool ayaa la micno ah in Villa ay guuldarreysatay ugu yaraan 20 jeer mid ka mid ah afartii xilli ciyaareed ee u dambeysay ee horyaalka – mana aysan guuldarreysan wax ka badan 17 kulan mid kasta oo ka mid ah 21-kii kulan ee ugu horreeyay Premier League.
>- Manchester United ayaa doonaysa inay noqoto kooxdii ugu horreysay taariikhda Premier League ee guuleysata afar kulan oo isku xigta, iyadoo ugu yaraan dhalisay saddex gool.
>- Man Unietd ayaa la garaacin sagaal kulan oo horyaalka Premier League, iyadoo lix guul gaartay halka saddex kale ay barbaro gashay.
>- Waxay guuleysteen afartii kulan ee ugu dambeysay horyaalka iyo koob – waana socodkoodii ugu fiicnaa tan iyo markii ay guuleysteen siddeedii kulan ee ugu horreeyay ee uu leyliyo Ole Gunnar Solskjaer intii u dhaxeysay Disember 2018 iyo Janaayo 2019.
>- Bruno Fernandes ayaa gacan ka geystay 11 kulan sagaalkiisii kulan oo uu ciyaaray horyaalka Premier League, waxa uu dhaliyey lix gool, isagoo caawiye ka ahaa shan gool oo kale.
>- Mason Greenwood ayaa dhaliyey 15 gool tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, waana da’yarka kaliya ee goolal sidaas u badan u dhaliyey hal xilli ciyaareed Red Devils, kaddib George Best kal ciyaareedkii 1965-66, Brian Kidd fasal ciyaareedkii 1967-68 iyo Wayne Rooney xilli ciyaareedkii 2004-05, kuwaasoo dhammaantood dhaliyey 17 gool.
>- Anthony Martial ayaa hal gool u jira inuu noqdo ciyaaryahankii 10-aad ee Man United 50 gool uga dhaliya horyaalka Premier League, waxaana haddii uu caawa gool dhaliyo uu sidoo kale noqon karaa Faransiiskii labaad ee sidaasi kooxda u sameeya kaddib Eric Cantona.